Steps चरणमा कुकि blog ब्लग कसरी सिर्जना गर्ने ThermoRecines
Steps चरणमा कुकि blog ब्लग कसरी सिर्जना गर्ने
तपाई चाहानुहुन्छ तपाईंको आफ्नै कुकि blog ब्लग सिर्जना गर्नुहोस् र तिमीलाई कसरी थाहा छैन? त्यसोभए चिन्ता नलिनुहोस्, थर्मोरसेटसमा हामी तपाईंलाई ० र भित्रबाट पकाउने व्यंजनहरूको ब्ल्ग सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछौं। १ easy सजिलो चरणहरू जुन सबैलाई उपलब्ध हुन्छ यदि उनीहरूसँग इन्टरनेट वा प्रविधिको बारेमा पहिले नै ज्ञान छैन भने।
एक डोमेन छनौट गर्नुहोस्
तपाईंले खाना पकाउन ब्लग सेट अप गर्न आवश्यक पहिलो चीज भनेको हो तपाईले प्रयोग गर्न चाहानुभएको डोमेन छनौट गर्नुहोस्। डोमेन इन्टरनेटमा तपाईंको छवि र ब्रान्ड हुनेछ त्यसैले यो वास्तवमै महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो र राम्रोको चयन गर्न केही समय खर्च गर्नु उपयुक्त छ, किनकि पछि तपाईं यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ तर त्यो एउटा जटिल कार्य हो र यो आवश्यक हुनेछ कि तपाईंलाई मद्दत गर्ने एक विशेषज्ञ
तपाईंको ब्लग को लागी एक राम्रो डोमेन छनौट कुञ्जी हो
तपाईंको ब्लगको लागि राम्रो डोमेन छनौट गर्न केहि सुझावहरू:
नाम छनौट गर्नुहोस् याद गर्न सजिलो, यसको मतलब केहि हो। उदाहरण को लागी, यदि तपाईंको नाम सारा हो यो केहि जस्तो लाग्न सक्छ lasrecetasdesara.com वा समान।
डोमेन बनाउने प्रयास गर्नुहोस् सकेसम्म छोटो किनकि यसले सम्झन सजिलो बनाउँदछ।
यो lवा अधिक स्पष्ट रूपमा सकेसम्म। यदि तपाइँको ब्लग खाना पकाउने व्यंजनहरु को बारे मा छ भने, तब डोमेन नाम को लागी यसलाई पनी स्पष्ट पार्नु पर्छ जसले यसलाई पढ्छ कि यो एक नुस्खा ब्लग हो।
कुञ्जी शब्दहरू समावेश गर्नुहोस् डोमेन भित्र। यदि तपाईंको ब्लग डेसर्टहरूको बारेमा हो भने, तपाईंको डोमेन भित्र "डेसर्टहरू" शब्द राख्ने प्रयास गर्नुहोस्, जस्तै todosmypostres.com वा यस्तै।
प्रयोग गर्नुहोस् .com विस्तार, किनकि यो अन्तर्राष्ट्रिय मा सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको छ। केवल स्पेन को लागी एक वेबसाइट बनाउने मामला मा तपाई एक्स्टेन्शन .es को विकल्प रोज्न सक्नुहुन्छ तर अन्य देशहरुबाट कहिल्यै दुर्लभ विस्तार वा विस्तार प्रयोग नगर्नुहोस्।
एक पटक हामीले नाम छनौट गरे पछि, अर्को चरण हुनेछ यसलाई तपाईंको नाममा दर्ता गर्नुहोस्। यहाँ हाम्रो सिफारिस Godaddy को उपयोग गर्न को लागी हो, किनकि यो प्लेटफर्म मध्ये एक हो सबै भन्दा राम्रो मूल्य प्रस्ताव र सबै ग्यारेन्टीहरूको साथ। तपाईको डोमेन रेजिष्टर गर्न तपाईले भर्खरै गर्न पर्छ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, तपाईंले छनौट गरेको नाम राख्नुहोस् (पहिले यो अवस्थित छैन भनेर जाँच गर्नुहोस्, किनकि यदि यो अवस्थित छ भने तपाईंले अर्को नाम खोज्नुपर्नेछ) र तिर्नुहोस्।
साथै अब तपाईं एक छ विशेष प्रस्ताव किन तपाईं सक्नुहुन्छ .com डोमेन खरीद गर्नुहोस् केवल € ०.0,85 यहाँ क्लिक गरेर
एक डोमेन किन्नको लागि चरणहरू
निम्न स्क्रीनशटहरूमा हामी गोड्याडी प्लेटफर्ममा एक डोमेन किन्नको लागि चरण-चरण देख्दछौं।
चरण १ र २
Godaddy वेबसाइट प्रविष्ट गर्नुहोस्, डोमेन नाम लेख्नुहोस् र खोजी बटनमा क्लिक गर्नुहोस् कि डोमेन उपलब्ध छ वा छैन भनेर हेर्नका लागि।
यदि डोमेन उपलब्ध छ भने तपाईं भाग्यमा हुनुहुन्छ। अब चयन बटन मा क्लिक गर्नुहोस्।
बटनमा क्लिक गर्नुहोस् कार्ट गर्न जारी राख्नुहोस् खरीद प्रक्रियाको साथ जारी राख्न।
चरण and र।
indica वर्षको संख्या तपाईं डोमेन किन्न चाहनुहुन्छ (हामी कम्तिमा2वर्ष सिफारिस गर्छौं) र त्यसपछि "भुक्तानी गर्न अगाडि बढ्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँबाट तपाईंले वेबमा मात्र दर्ता गर्नुपर्नेछ र तपाईंले क्रेडिट कार्ड वा पेपैल मार्फत सजिलै भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ।
र यो हो। अब के तपाईंसँग पहिले नै डोमेन छ हामी अर्को चरण हेर्न जाँदैछौं किनेको: होस्टिंग।
राम्रो होस्टिंग छनौट गर्नुहोस्
एक पटक हामीसँग डोमेन छ, अर्को चरण हुनेछ राम्रो होस्टिंग किन्नुहोस्। यस अवस्थामा हाम्रो सिफारिस को सेवाहरु को उपयोग गर्न को लागी हो राइओला नेटवर्कहरू जुन एक स्पेनिश प्रदायक हो जसले राम्रो मूल्यमा गुणवत्ता प्रदान गर्दछ र स्पेनिशमा १००% समर्थनको साथ। राइओला वेबसाइट पहुँच गर्न र उत्तम होस्टिंग भाडामा लिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईसँग प्रति महिना 2,95 २.XNUMX! बाट राम्रो होस्टिंग छ!
होस्टिंग खरीद गर्नका लागि चरणहरू
एक डोमेन किन्न को लागी, हामी कसरी चरणबद्ध एक राम्रो होस्टिंग खरीद गर्न को लागी व्याख्या गर्न जाँदैछन्।
राइओला वेबसाइट प्रविष्ट गर्नुहोस् र मेनूमा क्लिक गर्नुहोस् होस्टिंग> WordPress होस्टिंग।
होस्टिंग योजना छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंको आवश्यकता अनुसार उत्तम सूट गर्दछ। यहाँ हाम्रो सिफारिस हो प्रति महिना 6,95 €।। को लागि योजना खरीद गर्नुहोस् एक धेरै उचित मूल्य मा धेरै शक्तिशाली हुनु को लागी।
चरण,, and र।
डोमेनको नाम लेख्नुहोस् जुन तपाईं पहिले आफ्नो वेबसाइटको लागि खरीद गर्नुभयो। Point विन्दुमा तपाइँले यो संकेत गर्नुपर्दछ कि तपाइँ वर्डप्रेस स्थापना गर्न चाहानुहुन्छ (यो सँधै नयाँ संस्करण स्थापना गर्न सिफारिस गरिन्छ) र अन्तिम चरणको रूपमा तपाईले बटनमा क्लिक गर्नुपर्दछ। अर्डर प्रक्रिया गर्नुहोस्। यहाँबाट तपाईले नयाँ ग्राहकको रूपमा दर्ता भर्नु पर्छ र यस्तै भयो।
यहाँ एक पटक, हामी पहिले नै डोमेन र होस्टिंग खरीद गरेका छौं।
सामग्री प्रबन्धक स्थापना गर्नुहोस्
एक पटक यो बिन्दुमा, अर्को चरण हुनेछ सामग्री प्रबन्धक स्थापना गर्नुहोस् तपाईंको ब्लगमा व्यंजनहरू प्रकाशित गर्न सक्षम हुन। यहाँ कुनै श doubt्का छैन, सबै भन्दा राम्रो सम्भव सिफारिस हो WordPress, उपकरण जसले संसारका अधिकांश ब्लगहरू प्रबन्ध गर्दछ र जुन हामीले थर्मोरसेटासमा पनि प्रयोग गर्छौं (नोट: WordPress होस्टिंग खरीद चरणमा स्वचालित रूपमा स्थापना गर्न सकिन्छ, तर मात्र केसमा हामी तपाईंलाई पछि कसरी गर्ने भनेर बताउँछौं)।
तपाईंको नयाँ होस्टिंगमा WordPress स्थापना गर्न तपाईंलाई कुनै प्राविधिक ज्ञानको आवश्यक पर्दैन। राइओलासँग डिफल्टद्वारा स्थापित उपकरण छ जुन तपाईंलाई अनुमति दिन्छ4धेरै सजिलो क्लिकको साथ WordPress स्थापना गर्नुहोस्। यदि तपाईं यो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ देख्न चाहानुहुन्छ भने, यहाँ एक भिडियो छ जुन प्रक्रिया पूरा चरण-चरणमा वर्णन गर्दछ।
तपाईंको ब्लग डिजाइन गर्नुहोस्
ठीक छ, हामीसँग तपाईंको ब्लग लगभग तयार छ। अब तपाईंलाई केवल आवश्यक छ एउटा डिजाइन प्राप्त गर्नुहोस् जुन तपाईं मनपराउनुहुन्छ र सबै समाप्त हुन्छ। डिजाईन खोज्दा हामीसँग दुई विकल्पहरू छन्:
प्रयोग गर्नुहोस् नि: शुल्क डिजाइन: WordPress मा सयौं नि: शुल्क डिजाइनहरू छन् जुन तपाईं सजिलैसँग आफ्नो ब्लगमा स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सुरू गर्नुहोस्। यसको टेक्निकल नाम विषयवस्तु हो र तपाईं सम्पूर्ण क्याटलग हेर्न सक्नुहुन्छ यो पृष्ठ प्रविष्ट गर्दै.
प्रयोग गर्नुहोस् भुक्तानी डिजाइन: यो पछि सबै भन्दा सिफारिस गरिएको विकल्प हुनेछ थोरै भन्दा बढी dollars० डलर को लागी हामीसँग हाम्रो ब्लगको लागि केहि पेशेवर डिजाइनहरू हुन सक्छन्। अब म तिमीलाई केहि देखाउँछु।
व्यंजनहरु को लागी WP थिम
यो एक धेरै पेशेवर डिजाइन र उत्तम छ नुस्खा ब्लगका लागि अनुकूलित। तपाईं यसलाई $ for। को लागि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
फूड र रेसिपी WordPress थीम
अर्को डिजाइन खास गरी ब्लगहरू पकाउनको लागि। अरु के छ त मोबाइल र ट्याब्लेटमा पूर्ण रूपले अनुकूलन गर्दछ त्यसैले तपाईंको ब्लग कुनै पनि प्रकारको उपकरणमा सुन्दर देखिनेछ। यसको लागत $ 48 मात्र छ तपाईं यहाँ क्लिक गरेर खरीद गर्न सक्नुहुन्छ.
एक पटक तपाईं यो विन्दुमा पुगेपछि, तपाईंसँग आफ्नो ब्लग तयार छ र तपाईं मात्र पहिलो व्यंजनहरु प्रकाशन सुरु गर्नु पर्छ।
यहाँ हामी तपाइँलाई तपाइँको नयाँ वेबसाइटको साथ सफलता प्राप्त गर्न केहि तरिकाहरू दिदैछौं।
कसरी एउटा सफल किचन ब्लग सेट अप गर्ने?
एक सफल नुस्खा ब्लग प्राप्त गर्नुहोस्!
फोटोहरू आवश्यक छन् एक खाना पनी ब्लग मा। यदि तपाईंको नुस्खा अद्भुत छ भने यसले फरक पार्दैन यदि यससँगै भएको फोटो गुणस्तरीय छैन भने। तपाईंले धेरै आकर्षक फोटोहरू लिन आवश्यक छ र यसका लागि केहि उपयोगी सल्लाहहरू छन् जस्तै तटस्थ पृष्ठभूमि (प्राथमिकता सेता) प्रयोग गरेर, नयाँ डिजाइनको प्लेटहरू र यसले विशेष टच प्रदान गर्दछ। अवश्य पनि, सधैं याद राख्नुहोस् कि नुस्खा फोटोको नायक हुनुपर्दछ।
एक वाटरमार्क जोड्नुहोस् फोटोहरूमा तपाईंको ब्लगको नामको साथ। यसले तपाइँको पाठकहरूलाई तपाइँको वेबसाइट सम्झन मद्दत गर्दछ र एकै समयमा तपाइँको अनुमति बिना अन्य वेबसाइटहरू प्रयोग गर्नबाट रोक्नेछ।
अनुसरण गर्नुहोस् समान ढाँचा सबै फोटोग्राफहरू लिन (समान आकार, समान र colored्गको पृष्ठभूमि, आदि) ताकि प्रयोगकर्ताहरूले तपाईंको शैली पहिचान गर्न सक्दछन्।
एउटा राख नुस्खाको सुरूमा समाप्त डिशको फोटो। त्यसोभए यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने तपाईले आन्तरिक फोटोहरू राख्नका लागि मध्यवर्ती चरणहरू अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ, तर पाठकले सँधै देख्ने पहिलो फोटो तयार पारिएको हुनुपर्दछ।
आफ्नो दिनुहोस् नुस्खा को व्यक्तिगत स्पर्श। इन्टरनेटमा हजारौं रेसिपीहरू छन् त्यसैले आफैंलाई भिन्न बनाउन तपाईंले आफ्ना पाठकहरूको लागि मूल्य थप गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक थालीमा तपाइँको विशेष स्पर्श दिनुहोस् र तपाइँ एक वफादार दर्शकहरू पाउनुहुनेछ जुन तपाइँलाई हरेक दिन पढ्नेछ।
प्रयोग गर्नुहोस् बन्द टोन। तपाइँका पाठकहरू तपाइँका साथीहरू हुन्, तिनीहरूसँग कुरा गर्नुहोस् मानौं तिनीहरू नजिकको र न्यानो स्वरको साथ आजीवन मित्रहरू छन्। तिनीहरूले पक्कै यसको मूल्यांकन गर्नेछन्!
र ती सबै !. अब हामी केवल तपाईको चाहना गर्न सक्छौं तपाईको नयाँ ब्लगको साथ शुभकामना र तपाईं धेरै सफलता प्राप्त गर्न सक्छ।